श्रद्धा सुमन कमरेड मदन भण्डारी ! -
मदन भण्डारीको राजनीतिक उदय त्यतिखेर भयो जतिखेर नेपाल निरङ्कुश राजतन्त्रबाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सङ्क्रमण हुँदै थियो भने सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा ‘समाजवाद’को पतन भइरहेको थियो । यसर्थ दुई ध्रुवीय विश्व संरचनामा एउटा ध्रुव पछि धकेलिएको अवस्थामा थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको थियो ।
मुलुकभित्रको त्रि–शक्ति सन्तुलनको एउटा पक्षको हैसियतमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले लिने दिशा तरबारको धारमा हिँड्नु जत्तिकै जोखिमपूर्ण थियो । मुलुकमा स्थापित पुँजीवादी प्रजातन्त्रको यस स्वरूपलाई कसरी ग्रहण गर्ने र कस्तो कार्य दिशा लिने भनेर निर्णय लिनु रणनीतिक महत्त्वको काम थियो । यो सङ्गीन घडी थियो र यहाँ दुइटा उत्ताउला काम हुन सक्थे । मार्क्सवादी साहित्यमा भनिने गरिएका दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचलन र उग्र वामपन्थी भडकाव ।
(यी दुइटैले ल्याउने त विसर्जन नै हो ।) मुलुकमा स्थापित पुँजीवादी प्रणालीलाई कसरी हेर्ने र ग्रहण गर्ने ?! सामाजिक क्रान्तिको सामाजिक मिसन बिर्सने र सत्ताको शान र सुविधामा हेलिने वा ‘निरन्तर क्रान्ति’को नाममा क्रान्तिकारी शब्दाडम्बरको फेरी लगाइरहने वा अर्को पनि विकल्प छ । हो, पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई धोखाधडीको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ तर के त्यतिकै भरमा यसलाई अस्वीकार गर्ने या त्यसलाई पनि मुक्तिको उपकरणको रूपमा ग्रहण गर्ने ? सुधारवादी सङ्घर्षको उपादेयतालाई जण्ड क्रान्तिकारीको नाममा अस्वीकार गर्नु जायज हुन्छ ?! मदन भण्डारीले बिना लप्पनछप्पन व्यावहारिक सोचको अगुवायी गरे ।